अर्चना पनेरुको रेट साढे चार करोड ! – Medianp
मङ्गलबार, ३०, असोज, २०७५
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, मङि्सर २१, २०७४०८:४७
चर्चित वलिउड अनलाइन दैनिक भास्करले अर्चनाको बारेमा स्टोरी लेख्दै नेपाली सन्नि लियोनको उपमा दिएको छ ।अझ हाँस्यास्पद कुरा त के छ भने अर्चनाले एक फिल्म खेल्दा साढे चार करोड लिने गरेको समेत वलिउड भास्करले लेखेको छ, जबकी अर्चनालाइ केहि लाखमा मात्र राजु गिरीले ‘जिस्म’ फिल्मबाट डेब्यू गराएका थिए ।
त्यसो त सबटाइटलमा अर्चनाको रेट ४.५ करोड लेखेको अनलाइनले आफ्नो पुर्ण न्यूजमा भने ४.५ लाख लेखेको छ । यसले पनि वलिउड मिडिया नेपाली विषयको समाचार लेख्दा गम्भिर नभएर गलत जानकारी दिन पुगेको छुट्टयाउन सकिन्छ ।
मुस्कानसहित ज्वालाको मतदान
काठमाडौं उपत्यकामा आज प्रहरीको निःशुल्क यातायात सेवा (रुटसहित)
यी १० होटल जुन सुविधासम्पन्न तर सस्ता छन्, एक रातको कति पर्छ ?
नेपालमा कस्तो रेल आउला ? यही हुन् विश्वका ५ तिब्र गतिका रेल
गोली र बमले समेत केही नहुने गाडी चढ्छन विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुख, मूल्य कति ?